🥇 ▷ Xiaomi waxay diyaarineysaa afar taleefano gacmeed oo leh 108MP camera! ✅
Xiaomi waxay diyaarineysaa afar taleefano gacmeed oo leh 108MP camera!
Markii Samsung ay ku dhawaaqday 108 megapixel sensorkeeda, waxay sameysay iyada oo lala kaashanayo Xiaomi. Marka sidaa la yaab maahan in qalabka cusub ee loo yaqaan ‘ISOCELL Bright HMX sensor’ uu marka hore ka soo muuqan doono taleefanka casriga ah ee soo saarahaan. Ka xallinta inta badan macluumaadka ku wareegaya internetka, taleefanka casriga ah ee lahaan kara sharfida lagu qaado wuxuu noqon doonaa midka ugu sareeya Mi MIX 4. Si kastaba ha noqotee, waa inaan laga tagin kaligiis. Natiijooyinkaas cusubi miyay muujinayaan in Xiaomi uu shaqeynayo ugu yaraan afar taleefanno gacmeed oo leh kamarad 108MP ah.
Isha laga helay sahamintan cusub waa barnaamij-sameeyeyaasha XDA oo helay caddayn qalabkan aan la sii dayn ee ku jira dalabka MIUI Callery. Sida laga soo xigtay iyaga, MIUI Gallery App waxay ku dartay taageerada xalka buuxa 108MP ee sawir qaadista. Arrin xiise leh ayaa ah in codsigan uu si gaar ah u muujinayo astaantan. Waxaa taas ka sii daran, waxay la mid tahay afar aaladood oo leh magacyada lambar “toucan”, “draco”, “umi” iyo “cmi”. Qalab kasta oo ka mid ah aaladahaas waxaa si rasmi ah loogu sii dayn karaa magacyada Xiaomi iyo Redmi. Si kastaba ha noqotee, XDA-Soo-saareyaasha ayaa soo sheegaya in aaladdan midkoodna uusan ahayn MI MIX 4.
Faahfaahinta aaladahaas ayaan wali la ogeyn lamana garanayo inay si dhakhso ah loo soo deyn doono iyo in kale. Weli waxaa jira afar bilood illaa dhammaadka sannadka waxaanan hubnaa in Xiaomi iyo Redmi ay sii deyn doonaan warar dheeraad ah.
Qalabka dareema awoodaha taleefannadan casriga ah waa inuu noqdaa Samsung ISOCELL Bright HMX, maadaama uusan jirin soo saare kale oo ku dhawaaqay aaladda 108MP. Sidii aan soo sheegnay, Mi MIX 4 waxaa la rajaynayaa inay noqoto aaladda ugu horreysa oo leh 108MP dareemayaal, laakiin weli ma jiraan wax caddeyn ah.
Xaqiiqdii, Xiaomi ugama dhigeyso dhibcaha qof kale gacmihiisa. Sawir qaadistu waa meel iib weyn sida Huawei ay soo bandhigtay sannadihii ugu dambeeyay. Markaa sharad ku saabsan istiraatiijiyadda bixinta awoodaha sawirada sare waxay hubaal u noqon doonaan midho hubaal.